Boosted Na-ebupụta Ukwuu Ọgba Ọhụrụ Abụọ Dị Ike | Akụkọ akụrụngwa
Boosted na-ebupụta igwe eletrik abụọ dị ike n'ezie
Onye ngalaba-nchoputa nke Boosted John Ulmen, na-ewepụ obi ya na skate eletriki ọhụrụ nke ezinụlọ na ọ bụghị maka obere ịtụle uru ndị a igwe eletriki na-eji ọkụ eletrik na ogwe osisi.
Mgbe anyị na-ekwu maka Boosted, anyị ga-akọwa na ọ bụ ụlọ ọrụ amụrụ na Mee 2012 nakwa na ọ dị n'ọbara ha imepụta skatebọdụ eletriki na igwe a. Otu n'ime ihe ngosi kasịnụ maka Boosted bụ enweghị obi abụọ onye ama ama Youtuber Casey Neistat, onye nweelarị skateboard ọhụrụ a site na ezinụlọ Boosted ma nye anyị echiche ya.
1 Obere S na Obere X
2 Nkọwa nke Boosted Mini
Obere S na Obere X
Anyị nwere ụdị abụọ dị na nkọwapụta dịtụ iche. Ihe nlere anya nke nwere ahihia oroma bu nke a na-akpọ S na anyi nwere ike ikwu na obu ihe ntinye nke uzo a nke skates eletriki, obu ezie na ka anyi ghara inwe mgbagwoju anya, o nwere ikike zuru oke iji were anyi gburugburu obodo obula Mgbalị kacha nta. N'ihe banyere ụdị nke Mini X, anyị nwere ntakịrị ọsọ ọsọ karịa, yana ịrụ ọrụ nnwere onwe ka ukwuu yana ọ dịkwa ntakịrị ibu.
Nke a bụ vidiyo Casey Neistat banyere skateboard a pere mpe ma dị egwu:
Nkọwa nke Boosted Mini
Anyị enweghị obi abụọ ọ bụla na skatebọdụ ndị a nwere uru na ogo ọnụ ahịa ya na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị a:
Nso nke ihe ruru 7 kilomita maka S version na 14 kilomita maka ụdị X
Oke ọsọ nke 18 mph maka ụdị S na 20 mph maka ụdị X
Ha na-agbago ugwu dị elu karịa 20%
Moddị 3 eji maka ndị mbido, etiti ma ọ bụ ndị ọkachamara
Sdị S nwere ibu nke 15 lbs na ụdị X nke 16,8
Modelsdị abụọ ahụ nwere batrị 1.000 W
Regenerates batrị mgbe braking
Ọ nwere ngwa maka iOS na gam akporo
Njikwa ahụ bụ otu ihe dị na nsụgharị Longboard, ergonomic na inogide
Njikwa ahụ na-ejikọ site na Bluetooth na Skate
Oge nkwụ ụgwọ bụ oge 1: 15 maka ụdị S na 1:45 awa maka X
O doro anya na nnukwu ọdịiche dị na ndị a mbuli elu skateboard eletrik ọ bụ àgwà nke ihe ndị ahụ. N'ihe banyere ogologo oge, anyị ahụla mmụba dị ukwuu n'ihe gbasara nnwere onwe ma ọ bụ iguzogide mmiri, na mbata nke obere skates ndị a, ịgbagharị na karịa ikike niile. The price bụ 825 dollar maka S version na 1099 dollar n'ihi na X version, a n'ezie elu á »ná» but ego ma nke oma n'okpuru $ 1.600 na Boosted longboard-akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụta ya, buru n'uche na mbupu na-ewe n'etiti izu 8 na 10, ya mere ọ ga-adị mkpa inwe ndidi iji nweta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Boosted na-ebupụta igwe eletrik abụọ dị ike n'ezie
EBay's Super Weekend na-alaghachi azụ na azụmaahịa azụmaahịa dị elu
Mammoths nwere ike ịlaghachi na ndụ maka ọrụ a nke George Church na-eduzi